7 modi per leggere la Bibbia e incontrare realmente Dio | PREGHIERA&NEWS
Uzo asaa iji gua Akwukwo Nso ma zute Chineke
Anyị na-agụkarị akụkụ Akwụkwọ Nsọ maka ozi, ịgbaso iwu, ma ọ bụ ọrụ agụmakwụkwọ. Gụ izute Chineke na-ada dị ka nnukwu echiche ma dịkwa mma maka Onye Kraịst, mana olee otu anyị si eme ya n'ezie? Kedụ ka anyị nwere ike isi gbanwee echiche anyị wee hụ Akwụkwọ Nsọ dị ka mkpughe dị ebube bara ụba karịa akwụkwọ okpukpe nke ntuziaka na akụkọ ntolite?
Lee ụzọ asaa.
1. Kot ofụri mbụk Bible.
Ọtụtụ n’ime anyị amụtala ịgụ Akwụkwọ Nsọ site na akwụkwọ akụkọ Akwụkwọ Nsọ nke ụmụaka mejupụtara na akụkọ onye ọ bụla: Adam na Iv, David na Golayat, Jona na nnukwu azụ (o doro anya na ha bụ Jona na whale mgbe ahụ), achịcha ise na abụọ umuaka na ndi ozo. Anyi amutala icho akuko, akwukwo akwukwo akwukwo. Ihe na-agabigakarị ihe ndị a bụ ihe mmụta banyere omume ịtụkwasị Chineke obi, ime mkpebi ndị ziri ezi, ime ihe n'eziokwu, ijere ndị ọzọ ozi, ma ọ bụ ihe ọzọ.
Zọ ọzọ anyị si anụ ka a na-akụzi Akwụkwọ Nsọ bụ nke metụtara agwa, dị ka usoro nke obere akụkọ ndụ. Anyị amụwo ndụ Abraham, Josef, Rut, Sọl, Solomọn, Esta, Pita na Paul. Ha kụziiri anyị adịghị ike ha na iguzosi ike n'ihe ha. Anyị mụtara na ha bụ ihe atụ anyị ga-agbaso, ma ha ezughị okè.
Anyi aghaghi imuta igu akwukwo nke oma site na mmalite rue na njedebe. Akwụkwọ Nsọ bụ akụkọ banyere mgbapụta Chineke, mkpughe nke onwe ya na atụmatụ Ya maka ụwa. Akụkọ ndị ahụ niile na ihe odide ahụ niile bụ akụkụ nke ihe niile, ihe odide ahụ, mana ọ nweghị nke bụ isi. Ha niile na-ekwu maka isi: Jizọs Kraịst bịara, biri ndụ zuru oke, nwụọ ọnwụ na-emeghị ihe ọjọọ iji zọpụta ndị mmehie na igbu ọnwụ na mmehie, na otu ụbọchị ọ ga-alaghachi mmezi niile. N’ezie, ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-agbagwoju anya ma na-akpọ nkụ, mana ha kwekọkwara n’otu. Mgbe anyị ghọtara na enwere akụkọ zuru ezu, akụkụ ndị ahụ na-amalitekwa inwe nghọta na gburugburu ha. Mgbe ị na-eche etu esi agụ Akwụkwọ Nsọ, ị gaghị aghọta nnukwu akụkọ a na-agwa.
2. Chọọ Jizọs n’akụkụ nile nke ọgụgụ Bible.
Nke a bụ ndụmọdụ m ga-agwa Onye Kraịst ọ bụla hụrụ Akwụkwọ Nsọ dị ka onye ochie na onye na-adịghị ndụ: chọọ Jisos.Otutu ihe anyi n’enweghi n’Akwukwo Nso bu nihi na anyi n’acho odide di iche-iche, isi okwu na nkuzi karia Jisos. ọ bụ isi nke Bible dum. Ibu ụzọ chọọ ihe ọ bụla ọzọ pụtara ịdọbi obi nke Okwu Chineke n'ihi na Jizọs, dịka Jọn 1 gwara anyị, bụ Okwu ahụ mere anụ ahụ.
Peeji nke ọ bụla nke Akwụkwọ Nsọ na-arụtụ aka na Jizọs. Ihe niile dabara adaba iji tụọ ya ma nye ya otuto, gosi ya ma kpughee Ya. Mgbe anyị gụrụ akụkọ ahụ dum ma hụ Jizọs na peeji niile, anyị ga-ahụ ya ọzọ, ọ bụghị ka echiche ọ bụla anyị nweburu na mbụ anyị nwere. Anyị na-ahụ ya karịa onye nkuzi, karịa onye na-agwọ ọrịa, karịa onye nlereanya. Anyị na-ahụ obosara Jizọs site na nwoke ahụ ya na ụmụntakịrị nọdụrụ ma hụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ n'anya rue Eze nke eziomume na ebube nke ji mma agha. Guo Baibul ka ihu otutu Jisos n’ime ihe nile.
3. Ka ị na-agụ Bible, mụta banyere Jizọs.
N'ime Akwụkwọ Nsọ, anyị nwere ụzọ iji mara Jisus.Anyị nwere ụzọ iji mee ka nchọpụta, mmata na nchọpụta nke eziokwu pụta na mmekọrịta dị adị na nke Ya na Ya onwe. Dị ka anyị na-eme na mmekọrịta ọ bụla.
Mee ka ọ dị mma. Laghachi n’oziọma ndị ahụ ugboro ugboro. Okwu Chineke anaghị agwụ agwụ, o nwere ike ime ka nghọta na okwukwe gị sie ike mgbe niile. Anyi ekwughi na anyi na ndi anyi huru ime mkparita uka n'ihi na "anyi agwala ha" ma obu anyi ekwesiri igu ya na iguta Baibul n'ihi na "anyi aguala ya".
Jụọ Jizọs ajụjụ n’Akwụkwọ Nsọ. Jụọ maka agwa ya. Jụọ maka ụkpụrụ ya. Jụọ maka ndụ ya. Jụọ ya ihe ndị kacha ya mkpa. Jụọ maka adịghị ike ya. Yak itie N̄wed Abasi ọbọrọ fi. Ka ị na-agụ Bible ma na-amụtakwu banyere Jizọs, ị ga-achọpụta ihe ndị ka mkpa na ihe ndị ị na-eche banyere ha.
4. Mgbe ị na-agụ Bible, ahapụla ihe ndị siri ike.
Otu adịghị ike kachasị dị ịrịba ama nke ọtụtụ nkụzi nke Akwụkwọ Nsọ na ụka ọdịnala bụ nzuzu nke ihe niile siri ike n ’Akwụkwọ Nsọ na-eme. Ime ka à ga-asị na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị siri ike adịghị adị ma ọ bụ wepụ Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụrụ na Chineke achọghị ka anyị hụ ya, mara ya ma chee echiche banyere ya, Ọ garaghị ejupụta mkpughe onwe ya na ya.
Olee otú anyị si agụ ma ghọta ihe ndị siri ike na Baịbụl? Anyị ga-agụ ya ma tụlee ya. Anyị ga-adị njikere ịgba mbọ na ya. Anyị ga-ahụ ya dị ka usoro nke ederede na ederede nwere ike ịbụ nsogbu, mana dịka akụkụ nke dum. Ọ bụrụ na anyị gụọ akụkọ niile dị na Baịbụl ma lelee otú ihe a niile si ekwu banyere Jizọs, mgbe ahụ anyị kwesịrị ịhụ otú ihe si sie ike. Ihe niile dịịrị ya na nzube n'ihi na ihe niile na-ese onyinyo Chineke, na n'ihi na anyị anaghị aghọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile, ọ pụtaghị na anyị ga-ajụ ya.
5. Mgbe ọ na-adị gị ka ị gụrụ ịgụ Akwụkwọ Nsọ, bido obere.
Bible bụ ntọala nke okwukwe anyị. Mana ọ pụtaghị na anyị na-agụ naanị Akwụkwọ Nsọ. Akwụkwọ ndị ọzọ nke ndị ode akwụkwọ ji obi ha niile na-arụ ọrụ nwere ike imepe obi anyị na obi anyị n’ime Akwụkwọ Nsọ.
Fọdụ n’ime akụrụngwa kachasị mma n’agụụ Akwụkwọ Nsọ bụ maka ụmụaka. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na gụsịrị akwụkwọ na nkà mmụta okpukpe, arụsiwo m ọrụ ike ruo ọtụtụ afọ na mbipụta ndị Kraịst na ịgụ ugwu nke akwụkwọ nkuzi nke Bible, m ka na-ahụ isi ihe ndị a kachasị mma na nke kachasị mma n'ime ozi nke Akwụkwọ Nsọ. Ha na-eme ya obi uto site na iweputa akuko ma gosiputa isi okwu ha nke oma na obi oma.
Ihe ndi ozo na akwukwo di kwa uru. Fọdụ ga-ahọrọ nkwupụta ndị ahụ; ndị ọzọ ga-adọrọ adọrọ n'usoro ọmụmụ Bible. Nke ọ bụla nwere nnukwu nzube n’inyere anyị aka igwu ma ghọtakwuo. Egbula ha. Chọta ndị dabara na usoro mmụta gị ma mee ọtụtụ n'ime ha.
6. Agụghị Bible dị ka usoro iwu, kama dị ka akwụkwọ.
Otutu ndi otu Kraist adigh eji obi akwukwo Nso eme ihe nihi na ha abiaru ya nso ogologo oge n’usoro iwu. "You ghaghị ịgụ Bible gị kwa ụbọchị." Readinggụ Akwụkwọ Nsọ gị kwa ụbọchị bụ nnukwu ihe, mana na peeji ọ na-akọwa etu iwu si eme ka anyị mata mmehie. Mgbe anyị na-achịkwa iwu na ihe dị iche, anyị na-achọkarị iwepụ ndụ na ha, n'agbanyeghị etu ha si dị mma.
Anyị kwesịrị ile Akwụkwọ Nsọ anya dịka akwụkwọ. E kwuwerị, nke a bụ ụdị nke Chineke nyere anyị ya. Maka ndị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya, nke a pụtara na ha ga-eji akọ na uche weghachite ya n'ụdị nnukwu akwụkwọ na uche anyị, akụkọ ihe mere eme dị ukwuu, nkà ihe ọmụma miri emi, akụkọ ndụ bara ụba. Mgbe anyị chere maka ya otu a, anyị ga-ahụ ihe dị iche iche na ibe ya, ee, mana karịa ihe niile anyị ga - enwe ike imeri nnukwu nsogbu ọgụgụ ọgụgụ ọgụgụ.
Wee pụọ na ikpe mara iwu nke ịgụ Akwụkwọ Nsọ dị ka iwu. Nke a napụrụ ya ihe ịtụnanya ya ma na-eme ka ọ joyụ pụọ gị n’obi. Ọ dị ọgaranya na omimi; guo ya ichoputa ma ju ya anya!
Kpee ekpere maka enyemaka nke Mmụọ Nsọ ka ị na-agụ Akwụkwọ Nsọ.
Anyị nwere onye inyeaka na onye nkuzi. Jizọs kwukwara na ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụrụ na ọ laa n'ihi na onye inyeaka a dị ịtụnanya. N'ezie? Anyị ọ kaara anyị mma ma anyị anọnyereghị Jizọs n’ụwa? Yup! Nihi na Mo Nso bi na onye nke Kraist obula, nekwagide ayi ka ayi ka Jisos, kuziziri uche ayi ma me ka nkpuru obi ayi di nfe ma kwenye.
Ọ bụrụ n’ịgbalị ime ihe m dere na ike gị, ị ga-akpọnwụ, gbanahụ ihe mkpali, nwee nkụda mmụọ, nganga, inwe okwukwe, gbagwojuo Chineke anya.
Ijikọta Chineke site n'okwu ya bụ ọrụ ebube nke Mmụọ na ọ bụghị ihe enwere ike ịpụta. Ndụmọdụ niile m nyere ugbu a banyere otu esi agụ Akwụkwọ Nsọ abụghị akara nhatanha na-agbakwunye na mmekọrịta anyị na Chineke.Ha bụ ihe ga-adịrịrị, mana naanị mmụọ nsọ nwere ike ịgwakọta ma kwadebe ha ka anyị wee hụ Chineke n'ebube Ya. a na-akpali anyị iso ya na ịsọpụrụ ya. Ya mere, na-arịọ Mmụọ Nsọ ka o meghee anya gị mgbe ị na-agụ ihe. Rịọ Mmụọ Nsọ iji kpalie gị ịgụ ihe. Ọ ga-emekwa. Enwere ike ọ bụghị na ọkụ, mana ọ ga-eme. Na mgbe ị na-amalite ịgụ Akwụkwọ Nsọ, na-abanye n'ime Okwu Chineke, ị ga-ahụ na Mmụọ Nsọ na ozi Chineke n'ime Akwụkwọ Nsọ ga-agbanwe gị.
Nke gara aga Post Gara aga post:St. Wolfgang nke Regensburg, Senti nke ụbọchị 31 Ọktoba
Next Post → Post ozo:Nsọpụrụ ụbọchị: olile anya nke Eluigwe